समाचारराजनीतिसमाजअपराधखेलकुदप्रवासविश्वअर्थतन्त्रBUDGETPOLICY/PROGRAMECO SURVEYTAX/REVENUEAID/LOANDEVELOPMENTINVESTMENTTRADEवित्त CENTRAL BANKBANK/FINANCEINSURANCEMUTUAL FUNDREMITTANCECOOPERATIVEउद्योग SERVICECONSTRUCTIONPRODUCTIONCORPORATIONSMEsबजारCAPITALCOMMODITYAUTORETAILGOLD/OILANNOUNCEMENTप्रविधि SOFTWAREHARDWAREINTERNETविचारअन्तरवार्ताप्रवासरोजगारविश्वभिडियो BUDGET
बुद्धबार, चैत्र ९, २०७३ साल काठमाडौंः अर्थ मन्त्रालयले पुर्नगठित ७४४ स्थानीय तहलाई एक एक करोडका दरले सात अर्ब ४४ करोड रुपियाँ बाँडेको छ । यो स्थानीय तहको भौतिक पूर्वाधार विकासमा खर्च हुने जनाइएको छ । अर्थमन्त्री..
पुँजीगत खर्च बढाउन भन्दै अर्थले ल्यायो तत्कालिन कार्ययोजना
बुद्धबार, माघ ५, २०७३ साल काठमाडौंः अर्थ मन्त्रालयले अर्थतन्त्र सुधारका प्रमुख क्षेत्रहरुलाई समेटेर सुधारको तत्कालिन कार्ययोजना ल्याएको छ । अर्थमन्त्रीले बुधबार एक कार्यक्रम गरी यसको सार्वजनिक गरेका हुन । कार्ययोजनामा ६३ बुँदा छन् । समस्टिगत आर्थिक..
काठमाडौं महानगरको विकास बजेट पौन पाँच अर्ब, साधारण खर्च ६६ करोड
मंगलवार, पौष २६, २०७३ साल काठमाडौंः काठमाडौं महानगरपालिकाको २९ औं परिषदले आगामी आर्थिक बर्षका लागि पाँच अर्ब ३७ करोड रुीपयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । जसमा चार अर्ब ७१ लाख रुपियाँ बिकास खर्चको लागि छुट्याएको..
विद्युतभार कटौती गर्न भन्दै अर्थले दियो उर्जालाई सवा पाँच अर्ब रुपियाँ
मंगलवार, मंसिर २८, २०७३ साल काठमाडौंः विद्युत्भार कटौतीमुक्त अभियानलाई अगाडि बढाउनका लागि भन्दै अर्थ मन्त्रालयले उर्जा मन्त्रालयलाई पाँच अर्ब ३७ करोड रुपियाँ बजेट थप निकासा गरेको छ । ऊर्जाले प्रस्ताव गरेअनुसार नै बजेट निकासा गरिएको बताइएको..
अर्थ मन्त्रालयले गर्यो मातहतका विभागीय प्रमुखहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता
मंगलवार, असोज ४, २०७३ साल काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले मातहतका विभाग र तालिम केन्द्रका प्रमुखहरुसँग चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको छ । राजश्व सचिव राजन खनालसँग विभागका महानिर्देशकहरु र राजश्व प्रशासन तालिम केन्द्रका प्रमुखले..
पूरकबजेट ल्याउने महराको तयारी, सत्तारुढ काँग्रेसकै नेता भन्छन्– आउँदैन
सोमबार, भाद्र २०, २०७३ साल काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले चालु आवको बजेटलाई थप व्यवहारिक र कार्यान्वयनमुखी बनाउन पूरक बजेट आउन सक्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्रालयमा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थमन्त्री महराले अघिल्लो सरकारले..
हामीले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन होसः एमाले
आईतवार, भाद्र ५, २०७३ साल काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालले आफ्नो पार्टीको नेतृत्व रहेको सरकारले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । एमालेको आइतबार बसेको स्थायी समिति बैठकले..
आश्रित विधेयक फेल भएर केही फरक पर्दैनः अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार
शनिबार, श्रावन ८, २०७३ साल काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार गोविन्द नेपालले संसदबाट आश्रित विधेयक फेल भएपनि तत्काल मुलुकको अर्थतन्त्रमा कुनै समस्या नआउने दावी गरेका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लबमा उनले भने, ‘अहिले पूरानै..
बजेटसम्वन्धी तीन विधेयकहरु संसदबाट अस्वीकृत
शुक्रबार, श्रावन ७, २०७३ साल काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदले बजेटसँग सम्वन्धित तीन आश्रित विधेयक बहुमतले अस्वीकृत गरेको छ । स्वीकृत गर्नेमा स्वयम बजेट पेश गर्ने पार्टी माआवादी केन्द्र पनि छ । सत्ता छाडेर काँग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री..
विनियोजन विधेयक पारित, सरकारलाई खर्च गर्न बाटो खुल्यो
शनिबार, आषाढ २५, २०७३ साल काठमाडौं । संसद्को शनिबारको बैठकले विनियोजन विधेयक, २०७३ लाई बहुमतले पारित गरेको छ । उक्त प्रस्ताव पारित गरियोस् भनी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सदनमा पेस गरेका थिए । त्यसअघि सदनले विनियोजन विधेयक,..
संसदमा विनियोजित बजेटमाथिको छलफल असार ६ गतेदेखि
बुद्धबार, आषाढ १, २०७३ साल काठमाडौँ। विनियोजन विधेयक, २०७३ का विभिन्न शीर्षकमा यही असार ६ देखि २२ गतेसम्म छलफल हुने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्ले आज प्रकाशन गरेको बजेटसम्बन्धी छलफल कार्यक्रमअनुसार विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी निकाय एवम् सचिवालयको..
बजेट पारित भएकै छैन कसरी महँगी बढ्छ? अर्थमन्त्री पौडेल
शनिबार, जेष्ठ २९, २०७३ साल काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पारित हुन बाँकि बजेटका कारण महङ्गी बढ्यो भन्नु औचित्यहीन भएको दाबी गरेका छन् ।बजेटका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ नबढेको पनि उनले दाबी गरेका छन्..
संसदमा अर्थमन्त्रीको जवाफ: समतामुलुक समाज निर्माणका लागि न्यायोचित बजेट
शुक्रबार, जेष्ठ २१, २०७३ साल काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा वित्तीय अनुशासनको लक्ष्मण रेखालाई आत्मसात् गरी बजेट प्रस्तुत गरेको बताएका छन् । आव २०७३÷०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान..
बजेटमाथिको छलफल आज सकिँदै, अर्थमन्त्रीले उठेको प्रश्न माथि जवाफ दिने
शुक्रबार, जेष्ठ २१, २०७३ साल काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदमा सोमबारदेखि सुरु भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल शुक्रबार सकिँदै छ ।
बजेटमाथी हिजोसम्म १ सय ५० सांसदहरु छलफलमा सहभागी भएका थिए । शुक्रबार केही बोल्न बाँकी..
‘पेन्सन नदिएर सरकारले किसानको एउटा खुट्टा भाँचिदियो’
मंगलवार, जेष्ठ १८, २०७३ साल काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेको कृषि विकास मन्त्री हरिबोल गजुरेलले सरकारले किसान पेन्सनको योजनालाई बजेटमा समावेश नगरेर बजेटलाई अपाङ बनाएको गुनासो गरेका छन् । राजधानीमा मंगलबार एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले..
यस्तो छ निजी क्षेत्रको बजेट प्रतिक्रियाः बजेट सकारात्मक तर कार्यान्वयनमै शंका
सोमबार, जेष्ठ १७, २०७३ साल काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि शनिबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुले खुलेर समर्थन नगरे पनि सावधानीपूर्ण समर्थन जनाउदै कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । यस्तो छ..
बजेटबारे विपक्षीको सामना गर्ने ओली र दाहालको यस्तो छ सहमति
सोमबार, जेष्ठ १७, २०७३ साल काठमाडौँ। सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दल नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरुबीच सरकारले ल्याएको नयाँ बजेटमा व्यवस्थापिका–संसद्मा मिलेर विपक्षीको सामना गर्ने सहमति भएको छ । एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी..
काँग्रेसको विरोधपछि संसद्को बैठक दोश्रो पटक स्थगित, अर्को बैठक १:३० बजे
सोमबार, जेष्ठ १७, २०७३ साल काठमाडौँ। व्यवस्थापिका–संसद्को दोस्रोपटक बसेको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसको विरोधका कारण पुनः स्थगित भएको छ । आधा घन्टाका लागि स्थगित भएको सदनको बैठक दोस्रोपटक सुरु भएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले..
बजेट कसैको इच्छापत्र होइनः महत, निजी क्षेत्र खुशी बजेटमा अरुको किन विरोध ?: अधिकारी
आईतवार, जेष्ठ १६, २०७३ साल काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं सत्तारुढ एमाले नेता भरतमोहन अधिकारीले कर्मचारीको तलव बृद्धि र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धिबाहेक बजेटमा आएका सबै विषय मुलुकको आवश्यकता भएको दावी गरेका छन । रिपोर्टर्स क्लबमा आइतवार..
बजेट कार्यान्वयनका चुनौति पन्छाउने हामीसँग संकल्प, आत्मविश्वास र योजना छः पौडेल
आईतवार, जेष्ठ १६, २०७३ साल काठमाडौं । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेट कार्यान्वयनका प्रत्येक चुनौतिको सामना गर्न आफूहरु तयारीका लागि प्रस्तुत भएका बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि साढे खर्ब रुपियाँको जम्बो बजेट प्रस्तुत गरेको भोलिपल्ट..
बजेटका बारे पूर्वअर्थमन्त्रीदेखि व्यवसायीसम्म के भन्छन ?
शनिबार, जेष्ठ १५, २०७३ साल काठमाडौं । सरकारले आज संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई लिएर निजी क्षेत्र सकारात्मक नै देखिए पनि केही पूर्वअर्थमन्त्रीहरु भने यसको कार्यान्वयन प्रश्न उठाइरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको..
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १०,४८,९२,१३,५४,००० रुपियाँको बजेट
शनिबार, जेष्ठ १५, २०७३ साल काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा चालुतर्फ छ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड..
आगामी आवमा ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, महंगी ७.५ प्रतिशतमा कायम राखिने
शनिबार, जेष्ठ १५, २०७३ साल काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा छ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र सात दशमलव पाँच प्रतिशतमा महंगी कायम राखिने बताएको छ । कर्मचारीको उच्च तलव वृद्धि गरेको सरकारको सात..
कर्मचारीको २५ प्रतिशत तलव वृद्धि, एक दिनको तलव बराबर बार्षिक ग्रेड पनि
शनिबार, जेष्ठ १५, २०७३ साल काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको २५ प्रतिशत तलव वृद्धि गरेको छ । विगत तीन वर्षदेखि तलव वृद्धि नभएका कर्मचारीहरुलाई यस पटक भारी तलव वृद्धि गरिएको हो । त्यसबाहेक उनीहरुलाई एक दिनको..
सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधार विकास बैंक स्थापना गरिने
शनिबार, जेष्ठ १५, २०७३ साल काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पूर्वाधार विकास बैंक खडा गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले शनिबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा यस्तो निर्णय गरेको हो । ठूला भौतिक पूर्वाधार आयोजनाहरुमा लगानी..
काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माण सुरु गर्ने सरकारको योजना
शनिबार, जेष्ठ १५, २०७३ साल काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल निर्माण सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । लामो समयदेखि चर्चाको रुममा मात्रै रहँदै आएको मेट्रो रेलको कल्पना आउँदो आर्थिक वर्षमा..
नेवानिलाई सार्वजनिक कम्पनी बनाई दुईवटा वाइड बडी विमान भित्राउने
शनिबार, जेष्ठ १५, २०७३ साल काठमाडौं । सरकारले सरकारी स्वामित्वको विमान सेवा प्रदायक नेपाल वायुसेवा निगमलाई सार्वजनिक कम्पनीमा रुपान्तरण गरी आगामी आर्थिक वर्षमा दुई वटा वाइड बडी जहाज ल्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले शनिबार सार्वजनिक..
विद्युत प्राधिकरणलाई तीन टुक्रामा खण्डीकरण गरिने
शनिबार, जेष्ठ १५, २०७३ साल काठमाडौं । निकै वर्षदेखि चर्चामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खण्डिकरण आगामी आर्थिक वर्षको कार्यान्वयन हुने संभावना देखिएको छ । सरकारले शनिबार संसदमा प्र्रस्तुत गरेको बजेटमा प्राधिकरणलाई तीन टुक्रामा खण्डीकरण गर्ने..
काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग निर्माण गर्न १० अर्ब रुपियाँ विनियोजन
शनिबार, जेष्ठ १५, २०७३ साल काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंदेखि निजगढसम्मको द्रुतमार्ग निर्माण गर्न १० अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बहुचर्चित यस आयोजना यसअघि भारतीय कम्पनीलाई दिने तयारी भए पनि वर्तमान सरकारले आफ्नै लगानीमा..
पेट्रोलियम पदार्थमा थप कर लगाएर बुढीगण्डकी बनाउने सरकारको निर्णय
शनिबार, जेष्ठ १५, २०७३ साल काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा थप कर लगाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा पाँच प्रतिशत पूर्वाधार कर लगाएर जलविद्युतमा लगानी गर्ने नीति सरकारले लिएको हो । नेपाल आयल..
Results 73: You are at page 1 of 3